टीकापुर काण्डका चौधरीलाई किन उन्मुक्ति ? | abc.com.np
टीकापुर काण्डका चौधरीलाई किन उन्मुक्ति ?
कैलाली । टीकापुरमा भएको थरुहट र थारुवान स्वायत्त प्रदेश पक्षधर आन्दोलनकारीमार्फत प्रहरीमाथि घेरावन्दी गरी हत्याको योजना बुन्ने प्रमुख योजनाकार रेशम चौधरी अहिलेसम्म पक्राउ पर्न सकेका छैनन् । प्रहरी चौधरीलाई ब्यापक खोजी गरेको बताएता पनि अहिलेसम्म उनी पक्राउ नपर्नुलाई आश्यर्च मानिएको छ । उता टीकापुर बर्बरता काण्डमा हत्या गरिएका प्रहरी परिवारलाई भने सरकार र स्वयम् प्रहरी संगठनले केही लाख रकम दिने घोषणा गरेर अपराधीलाई पक्राउ गर्नतर्फ अग्रसर भएको देखिन्न् । उक्त काण्डमा आक्रमणकारीले सशस्त्र प्रहरीलाई समेत जिउँदै जलाएका थिए ।
आक्रमणमा नेपाल प्रहरीका एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेलगायत करिब एक दर्जन प्रहरीको वीभत्स तथा निर्मतापूर्वक हत्या भएको थियो । घटना सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीलाई असयोग गर्दा अकल्पनीय बनेको आमनागरिकले बताइरहेका छन् । जतिबेला घेरावन्दीमा पारी प्रहरीको निर्मतापूर्वक हत्या भइरहेको थियो, त्यतिबेला हत्याको योजना बुन्ने रेशम चौधरीसँग निकट सम्वन्ध बनाएका सशस्त्रका एसपी लक्ष्मण सिंह लडाईंको मैदानबाट फरार भइसकेको थिए । जसका कारण आन्दोलनकारीले घेराबन्दीमा पारी एसएसपी न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीलाई लखेटी–लखेटी घरेलु हतियार प्रयोग गरेर हत्या गरेका थिए । सशस्त्रका एसपी सिंहको अंगरक्षक रामबिहारी धौधरी, प्रहरी लक्ष्मण खड्का र लोकेन्द्र चन्दको हत्या हुँदा पनि हतियार नचलाउने सशस्त्र प्रहरीले फरार चौधरीको साथ दिएको पुष्टि हुन्छ । जबकी सशस्त्र प्रहरीका जवान फायरिङ खोल्न आतुर देखिएका थिए, तर आदेश नहुँदा अन्योलग्रस्त देखिन्थे ।
को थिए हत्याका योजनाकार ?
भदौ ६ गते टीकापुरस्थित उग्रतारा सशस्त्र प्रहरी गणमा भएको छलफलमा थरुहट र थारुवानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने सहमति बनेको थियो । रेशम चौधरी (आन्दोलन संयोजक) ले सुरक्षा अधिकारीहरूलाई प्रदर्शन शान्तिपूर्ण हुने विश्वास दिलाएका थिए । एक दशक भन्दा बढी राजधानीमा नै विताएका चौधरी एक कुशल गायक पनि हुन् । उनैले सुरक्षा निकायलाई संयमतापूर्वक नियन्त्रण गर्न र हतियार प्रयोग नगर्न सुझाएका थिए । सहमति भएको ठिक भोलिपल्ट आन्दोलनकारीले गर्ने प्रदर्शन चौधरीले भने जस्तो भएन् । टीकापुर नगरक्षेत्र कब्जा गर्ने, नगरपालिकालगायत सरकारी कार्यालयमा थरुहट स्वायत्त प्रदेश बोर्ड टाँस्ने प्रचार गरिएता पनि रणनीति भने सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्नु देखियो । सोही रणनीति बमोजिम टीकापुर नगरक्षेत्रमा चारैतिरवाट जनसमुदायको भिड प्रवेश गराइयो र प्रहरीमाथि बर्वर आक्रमण गरियो । आन्दोलनका संयोजक चौधरीलगायतले अघिल्लो दिन आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सोही सहमतिका कारण प्रहरी प्रशासन ढुक्क थियो भने प्रशासन खासै तयारीमा पनि थिएन । तर आन्दोलन भएको दिन आन्दोलनलले अर्कै रुप लिँदा धेरै सुरक्षाकर्मी मारिए । प्रशासनमा गरेको खिखित सम्झौता अनुसार पनि चौधरी यो घटनाको प्रमुख योजनाकार देखिएका छन् । उनैले दिएको सूचना अनुसार सुरक्षा निकाय सामान्य तयारीमा भएका कारण उक्त अकल्पनीय घटना घटेको प्रशासनले दावी गर्दै आएको छ । यदि त्यसो हो भने अहिलेसम्म किन पक्राउ पदैनन् चौधरी ?
कुनै बेला राष्ट्रिय तेक्वान्दो खेलाडी, चर्चित गायक, सञ्चारकर्मी समेत रहेका चौधरी एकताका राजीवादी थिए । नेपाली सेनामा समेत उनले तेक्वान्दो प्रशिक्षण दिने गर्थे । राजधानीका विभिन्न एफएमहरुमा समेत कार्यक्रम चलाउने चौधरी विगत केही बर्षदेखि आफ्नै लगानीमा एमएम सञ्चालन गरेर कैलालीमै बस्दै आएका थिए । पछिल्लो समयमा नेपालस्थित भारतीय दुतावाससँग घनिष्ठ सम्वन्ध बनाएका चौधरी अहिले पनि भारतमा आश्रय लिइरहेको बताइन्छ । के अब हत्याका प्रमुख योजनाकार र लिखित सम्झौंता प्रशासनमा गरेर पनि आन्दोलनलाई हिंसात्मक बनाउने चौधरीमाथि कारबाही हुदैन ? के नेपाल प्रहरीले चौधरीलाई कारवाही गर्ला त ?